Ny Combo mpandresy amin'ny vokatra, safidy ary fihetsem-po | Martech Zone
Asabotsy Jolay 17, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
The Jellyvision Lab dia namoaka ebook kely mahavariana momba ny fomba fanolorana ny safidin'ny vokatra. Mampitaha ny fihetsiky ny mpiantsena amin'ny fivarotana lehibe amin'ny Internet ireo ebook ireo ary manome porofo fa mitovy ny fihetsika.
Mety hieritreritra ianao fa goavana ny fivarotana lehibe, saingy mampahatsiahy antsika i Jellyvision fa misy habaka tsy manam-petra ao amin'ny tranonkala, ary ny fomba fampisehoanao ny vokatrao sy ny serivisinao dia afaka manisy tsy fitoviana lehibe. Ireto misy lesona ianarana (atiny notsongaina sy namboarina tamin'ny ebook):
Vokatra bebe kokoa, mpanjifa sambatra kokoa - Raha manandrana manana tranonkala mahafinaritra ny rehetra ianao dia hamorona zavatra tsy tian'ny olona. Mamorona fizarana samihafa mba hankafizin'ny fizarana tsirairay. Amidio ny vokatra mety amin'ny mpanjifa mety. Loharano: Ny Ketchup Conundrum.
Saingy… Safidy bebe kokoa, Vitsy ny varotra - Safidy be loatra amin'ny pejy iray ihany no hampisafotofoto ny mpitsidika ary hiala izy ireo. Omeo sokajy sy sivana izy ireo hahafahan'izy ireo manafina izay tsy ilainy.
Tsy misy fihetsem-po, tsy misy fanapahan-kevitra - Raha tsy misy fihetsem-po dia mamakafaka sy mampitaha fotsiny ny ati-doha, mamakafaka ary mampitaha, mamakafaka ary mampitaha nefa tsy mahazo fehin-kevitra - lasa tsy mazava saina pathologically. Ny fihetsem-po no tena ahafahanao manapa-kevitra amin'ny safidy samihafa.
Ny eBook dia mandeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa ary mamerina ny fehin-kevitra rehetra miaraka. Sintomy izany rehefa mahazo fotoana ianao ary matokia fa hanaraka ny bilaogy Jellyvision, Ilay Mpiresaka.
Jul 19, 2010 amin'ny 10: 34 AM
Tsy mpankafy Ketchup aho dia nahita ny The Ketchup Conundrum ho famakiana hafahafa mahaliana. Toa misy lesona momba ny varotra any ho any.